Arday shahaaddooyin iyo abaalmarinno lagu guddoonsiiyay Muqdisho – Radio Muqdisho
Arday shahaaddooyin iyo abaalmarinno lagu guddoonsiiyay Muqdisho
Munaasabad ay key qalin jebinayeen 150 arday oo baratay xrfadaha Saxaafadda, Cillaansaarka iyo Macalinnimada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Ardaydan ayaa wax ka bartay dugsiga hormarinta waxbarashada iyo tababarrada ee Siedt, waxaana xafladda qalinjebinta ka qeybgalay mas’uuliyiin iyo walidiinta ardaydaasi.
Mas’uuliyiintii ka hadashay halkaasi ayaa ardayda key bogaadisay dadaalka ay galeen waxbarashada, iyagoo kula dardaarmay iney sii wadaan waxbarashada islamarkaana ay bulshada uga faa’iideeyaan aqoontooda.
Gebagebadii munaasabadda ayaa ardayda la gudoonsiyay shahaadooyin iyo abaalmarino oo maamulka dugsigu sheegay iney muteysteen.
Dhanka kale in kabadan 200 arday oo dhamaysatay dugsiga hooyga xamar ayaa maanta la gudoonsiayay shahaaddooyin kadib munaasabad lagu qabatay magaalada Muqdisho, taasi oo ay ka qeyb galeen waalidiin
aqoonyahno ka socda jaamacadaha magaalada iyo marti sharaf kale.
Maamulaha dugsigaasi C/raxmaan Sheekh Maxmuud Shaacir ayaa sheegay in dugsiga hoyga Xamar ay ka qalin jebisay dufcaddii 10-aad
“Dugsiga Hoyga Xamar maanta waxaa ka qalanjabinyay Dufcadii 10 aad ee dugsiga Sare, halkaan waxaa ka muuqda wax soo saar wanagsan ee Dugsiga Hoyga Xamar oo sanad wali oo soo saaro dugsiga hoyga xamar waxaa uu ku faanaa tayo waxbarsho, Ardayda ka baxaday Dugisga waxeey kalin xoog leh ka qataan Hormarinta Dalka” ayuu yir maamulaha dugsiga hoyga Xamar.
Taliyeyaasha ciidanka Booliiska Iyo Asluubta oo maanta kormeeray Xaruumaha ciidanka ee Afgooye
Muungaab oo xarigga ka jaray Kawaanka Kalluunka Dankulmis ee degmada C/casiis